ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်သူ များ(၀ါ)မေးမြန်းထားသူတွေအတွက် and for အားလုံးအတွက်(THT) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Mobile Tutorials ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်သူ များ(၀ါ)မေးမြန်းထားသူတွေအတွက် and for အားလုံးအတွက်(THT)
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်သူ များ(၀ါ)မေးမြန်းထားသူတွေအတွက် and for အားလုံးအတွက်(THT)
Thiha Htike at 9:35:00 PM Mobile Tutorials,
ပို့စ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတင်ပေးဖြစ်မယ်မဟုတ်ပါ နားလည်ပေးပါ..ယခုဒီပို့စ်ထဲမှ စာသား၊ပို့များသည် ဒီဆိုဒ်မှာရှိချင်ရှိပါလိမ့်မည် ၊ ဒီဆိုဒ်မှာရေးသော ဘလော့ခ်ဂါတွေရေးရင်ရေးခဲ့ဖူးမယ်
၊ ဒါပေမဲ့နားလည်ပေးပါ ၊ယခုမှစတင် Media Device များကိုသုံးမဲ့ သူများအတွက် သူတို့မရှာဖွေတတ်လို့ တောင်းဆိုလို့တင်ပေးရတာ ဆရာ၊
သင်တို့ ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုRecording သုံးမလဲ ဒါနဲ့စပ်စုပါအုံးမယ် Recording ဆိုတာဘာလဲ..???
ဟဲဟဲ ဒါက ကျွန်တော်သုံးတာ ကုန်ဘောင်ခေတတည်းက
ဒါနဲ့Facebook ကိုအခုထိ တင်ထားပြီးလဲမေးနေတုန်းပဲလား.....ရော့ဒါဆို အချီကြီးပေးလိုက်မယ် အဲ့မှာသွားကြည့်ရှိသင့်သလောက်ရှိတယ်.. :D
ကြည့်မနေနဲ့ဒီကိုသွားအဲ့မှာ ရှင်တို့ Facebook နဲ့ပတ်သတ်သမျှရှိတယ်
အော်ကားခမရှိလို့ ဘေ၁၀၀၀ ဖိုးသူများကိုရောင်းမလို့လား.. For BM ကားခ (တိန်စတာပါ bill transfer software)
CDMA 450/800 MHz NETWORK
CDMA 800 MHz (1500 kyat)
တို့ကို လက်ကျန်ငွေကြည့် ငွေဖြည့် တခြားသူများကို ဖြည့်ပေးခြင်းများကိုလဲ ပြုလုပ်နိုင်တယ်
၁၅၀၀ တန်ငွေဖြည့်နည်းကို ပုံနှင့်၇ှင်းပြထားပေးပါတယ်
ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ချင်တယ်ဆို၇င် ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ mSIM for Android DOWNLOAD
ဒါက ပလုပ်စတေး အဲ playstore မှဒေါင်းရန်
ဒါက ပလုပ်စတေးမရှိသော တရုတ်ကြီးသားသမီးတွေအတွက်
Mectel C800အတွက် Easy USSD.Apk
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီတစ်ခါ mectel
အဆင်ပြေစေတဲ့ apkလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် mectelတွေကို တိုက်ရိုက် internet လျှောက်လို့ရပါပြီ
Android ဖုန်းတွေအတွက် Telenor Myanmar မှ Telenor Myanmar Self-Care Application ကိုထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ Telenor Myanmar Self-Care App ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အချက်တွေကတော့
ဖုန်းငွေလက်ကျန်နဲ့ Data Usage စစ်ဆေးခြင်း
Check your balance & Data Usage
Telenor ဖုန်းအချင်းချင်း Bill လွှဲခြင်း
Telenor Myanmar ရဲ့ Mobile service များကို ယခု app အတွင်းမှရယူနိုင်ခြင်း
ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး ၊ နေပြည်တော် ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့များရှိ Telenor Myanmar ၏ စတိုးဆိုင်တည်နေရာများကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း
Telenor Myanmar Call Center သို့ယခု app မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားခြင်း စတဲ့ အချက်အလက်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Telenor Myanmar Self-Care App ကို မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား နှစ်မျိုးဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Android ဖုန်းတွေအတွက် Telenor Myanmar မှထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ Telenor Myanmar Self-Care App ကိုရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့
အောက်က link မှာရယူနိင်ပါတယ်။ 2.61 MB ရှိပါတယ်။
အော်ဒါနဲ့ ကျွန်တော်သုံးတဲ့ Keyboard လား (၀ါ) လှလှလေးလား..
Android ဖုန်းတွေအတွက် ကီးဘုတ်လေးပါ ... မရိုးအောင် ပြောင်းသုံးချင်သူများအတွက်ပါ
မရှိသေးသူများဒေါင်းလိုက်နော် အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ဒေါင်းရန်.. ဒီမှာ ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ၀င်ရောက်ဒေါင်းယူအသုံးပြုနိူင်ပါပြီး...
မှတ်ချက် ... လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ frozen keyboard ကို ဖြုတ်ပြီး မှ အသုံးပြုပါ ... တစ်ခုတင်တိုင်း တစ်ခုဖြုတ်ပါ....။
Myanmar Keyboard လှလှလေး
ဆိုတော့ ထူးခြားလှပမူ ကိုပေးမှာပါ လိုချင်သူများယူနိုင်ပါပြီ
IPHONE မှာ သုံးတဲ့ Emoji လေးတွေကို Android မှာ သုံးဖို့ iOS7Keyboard iPhone Emoji Apk v1.8
အသစ်အဆန်းလေးတွေကိုမှ ကြိုက်တဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ
IPHONE မှာ ပါဝင် အသုံးပြု့လို့ရတဲ့ Emoji လေးတွေကိုAndroid ဖုန်းမှာ
အသုံးပြု့ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီမှာယူလို့ရပါတယ်။Keyboard မှာပြောင်းရမှာ ဆိုတော့ နဲနဲရှုပ်မယ်နော်
Keyboard မှာ ios7keyboard app လို့ ချိန်းပေးပြီးတော့ space bar မှာ iOS7Emoji Keyboard
ကို ကလစ် ပေးလိုက်ရင် အသုံးပြု့လို့ရပါပြီ။ ရိုးရိုး keyboard ချိန်းသလိုပဲ ချိန်းပေးလိုက်ပါ
Google Play မှာတော့ 3.87 ဒေါ်လာပေးရပါတယ်။iOS7Emoji Keyboard ကိုအောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါ
MEDIAFIRE | SHAREBEAST | ZIPPYSHARE | TUSFILES
ကဲ ဖုန်းကို Zawgyi ရော unicode ရော သွင်းချင်သူများအတွက်ပါ
မြန်မာ ဖောင့် changer ပါ smart/zawgyi one နဲ့ padauk/mm3 ကို version အလိုက် ထည့်ထားပါတယ်။
zawgyiဆိုရင် zawgyi1 လား smart လား ရွေးခွင့် ရှိပီး frozen keyboard နဲ့ တွဲသွင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ unicode ဆိုရင်
myanmar3 လား padauk လား ရွေးခွင့်ရှိပီး burma Uni keyboard နဲ့ တွဲသွင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ font ကို သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါက ဖောင့်တေကို ပါမစ်နစ်သွင်းတာပါ။ mm font မရှိတဲ့လူလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ app ကို မသုံးချင်ဘူး mm font က ရှိပီးသား ကျော်တို့က ဖောင့်တေကို virtual ပဲ သုံးချင်တယ် ဆိုရင် xposed installer နဲ့ per app font (သို့) fonter မှာ app တခုချင်းဆီကို ဖောင့် တမျိုးဆီ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Root မရှိဘူး xposed မရလို့ unicode လည်း သုံးမရဘူးဆိုရင် firefox နဲ့ သုံးပီး tagu addon သုံးရင်
zaw ရော uni ရော ကို browser တခုတည်းမှာ သုံးနိုင်ပါတယ် ။
Zawgyi နဲ့ Unicode နှစ်မျိုးလုံးကို မြင်နိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဖောင့်
Zawgyi နဲ့ Unicode နှစ်မျိုးလုံးကို မြင်နိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဖောင်
သူ့ကွန်ပျူ တာမှာ Zawgyi ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြု ခဲ့တာဖြစ်ပြီး
အခုနောက်ပိုင်း Unicode ပါ အသုံးပြု ချင်လာတာရယ်
ပြီးတော့ အချို့သော နည်းပညာဆိုက်တွေနဲ့ သတင်းဆိုက်တွေမှာပါ
Unicode ကိုပဲ အသုံးပြု လာကြတော့ Zawgyi ဖောင့်ကို
ထည့်ပြီးအသုံးပြု နေတဲ့ သူအတွက် Unicode နဲ့ အသုံးပြု ထားတဲ့
ဟုတ်ပါတယ် အခုကျနော် ရေးနေတဲ့ဖောင့်နဲ့ကီးဘုတ်က
Unicode နဲ့ရေးထားအသုံးပြု ထားကြတဲ့ ညီအစ်ကို
များရဲ့ဆိုက်များမှ စာများကို အဆင်ပြေစွာမဖတ်နိုင်ပါ
ဒါပေမယ့် အမေးရှိရင်တော့ အဖြေဆိုတာလည်းရှိစမြဲပါခင်ဗျာ...
အခုကျနော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဖောင်ကိုသာ
မိမိကွန်ပျူ တာမှာ အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ
ဒီဖောင့်ကိုသာ အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ အင်တာနက်တစ်ခွင်ရဲ့
နည်းပညာဆိုက်နဲ့ သတင်းဆိုက်များရဲ့ Zawgyi နဲ့အသုံးပြု ထားတဲ့
ဆိုက်တွေကိုရော့ Unicode နဲ့ အသုံးပြု ထားတဲ့ ဆိုက်တွေကိုပါ
အသုံးပြု လိုတဲ့ဘော်ဒါတွေကတော့ အောက်ကလင့်တွေမှာ
Facebookမှာ Like တွေခိုးမှာလားဗျ..
မိမိတို့ Facebook Account ကိုတော့ဝင်ထားပြီးအောက်ကLink ကိုသွားလိုက်ပါ...
ပထမဦးဆုံး ဒီLink <<< Here >>>
နှိပ်ပြီးသွားရင်မိမိအကောင့်နဲ့ ၀င်မလာမေးရင် Oki နှိပ်ပြီးဝင်သွားလိုက်ပါ
ပြီးရင် အောက်က နောက်Link တစ်ခုကိုတက်ဝင်ပါ
ပြီးရင်အောက်ကပုံလို Success ပြတဲ့ အတိသွားပါ....
အဲ့တာနှိပ်တဲ့အချိန် facebook အကောင့်ကို တစ်မျက်နှာတည်းဘဲဖွင့်ထားတာ Facebook အကောင့်ကိုBroswer တစ်ခုတည်းအများကြီးမဖွင့်ထားပါနဲ့ အောက်ကပုံလိုပေါ်လာရင် View Source အနောက်က Link ကို Copy ကူးပါ....
အဲ့မှာနှိပ်ပြီးရင်မိမိတို့အကောင့် ၀င်သွားပါမယ် အောက်က ပုံလိုပါ.....
အဲ့မှာ Submit လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ မိမိတို့တင်ထားတဲ့ Post က Public အနေနဲ့တင်ထားဖိုိ့လိုပါတယ်
အောက်က ပုံလို မသိတဲ့ အကောင့်တွေက Auto Like နေပါလိမ့်မယ် connection ကောင်းနေရင်Likeတွေတက်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ အောက်က ပုံလိုပါ.....
G730-U00 Build Number 151 Root & Myanmar Font & Keyboard သွင်းနည်း
G730-U00 Build Number နောက်ဆုံး 151 Vroot မတိုး သူများအတွက်
Myanmar, Root,Keyboard တစ်ခါထဲ ထည့်သွင်းပေးမည့် Boot Img လေး လုပ်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အစကတော့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ အချို့က အဆင်မပြေကျလို့ပါ။
ဒါလေးကို SP Flash Tool ကနေ သွင်းလိုက်ရင် ရပါပြီ။
သွင်းပြီးလို့ ဖုန်းပြန်တက် လာလာခြင်း မြန်မာစာတွေ လွဲနေရင် ရိုးရိုး Restart ချပေးပါ။
Boot Img ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။
SP Flash Tool ကို ဒီမှာဒေါင်းပါ။
(ဒါဆိုအဆင်ပြေပါပြီနော် ညီငယ် အဆင်မမပြေတာရှိမေးပါ Main ကတော့ ညီ Firmware ပြန်တင်ြ့ပီးတော့စမ်းရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ် 151 အတွက်ကတော့ဒါနည်းအကောင်းဆုံမို့ တစ်မျိူးတည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..)
ဒါကတော့ Coolpad ကို Recovery Mode ထဲပဲဝင်ဝင်နေသော အကိုအတွက်
Main ကတော့ Driver ပေါ့ဗျာ driver သွင်းတတ်ရင် အဆင်ပြေတာပေါ့ ကဲအောက်မှာဖတ်ပြီးအဆင်ပြေပါစေဗျာ.
Coolpad 7060 (GSM ,WCDMA)
CPU - 1.0GHz
Display - 4'' (800x480)
✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌ ✌
coolpad 7060 ကို firmware ရေးဖို့ reseachdownload ဆိုတဲ့toolနဲ့ရေးရမှာပါ ဒေါင်းထားတဲ့coolpad 7060 pac file ကို reseachdowload tool ကိုဖွင့်ပြီး ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ setting ပုံလေးကိုနိုပ်ပါပြီးရင်ကွန်ပျူတာထဲမှ
pacfile ကိုထဲလိုက်ပ်ါပြီးရင် play ပုံစံခလုပ်လေးကိုနိုပ်ပါပြီးရင်ဖုန်းကို
battery ဖြုတ်ပြီးပြန်တက်ပ့ါ ပြီးရင်
vol upခလုပ်ကိုနိုပ်ပြီး ကွန်ပျုတာနဲချိတ်လိုက်ပါ firmware runနေပါပြီ pass ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါသွားရင်ရပါပြီ
COOLPAD: 7060 FIRMWARE
ဒီနေ့ တော့ ဦးလေးကြီးကို မေးထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှန်ရှန်တောက် ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ဖုန်းတွေလိုပဲပြောရမယ်
၁၅၀၀နဲ့ ချပေးတဲ့လိုင်းမမီတမီsim cardတွေနဲ့ တွဲသုံးတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ 
Coolpadဖုန်းတွေဟာ firmwareပြန်တင်တဲ့ အခါ အလွန်းတိုင်ပတ်ပါတယ်
ဘာလိုလဲဆိုတော့ နောက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဖုန်းများနဲ့ မတူလိုပါ
ဒါပေမယ့်firmwareတင်နည်းကတော့ အတူတူပါပဲ
ခုနည်းလေးနဲ့Coolpadဖုန်းအကုန်လုံးကို firmwareတင်လိုရပါတယ်
မိတ်ဆွေများကတော့ QDL TOOLလေးကိုအမြဲဆောင်ထားပါ
ဘာလိုလဲဆိုတော့ QDL TOOLလေးနဲ့ ပဲ firmwareတင်ရမှာမို့ ပါ
firmwareဖြစ်ပါသည် မြန်မာစာအတွက်တော့မပူပါနဲ့ တော့
facebook pageသို့ like နှိပ်ပေးပါအုံး(အောက်ကစာသားပေါ်သို့ နှိပ်ပြီးသွားပါ)
``Facebook page (acme mobile)
ကဲdowယူပြီးဆိုလျှင် မိမိတို့ pcကိုဖွင့်ပါ
ပြီးပါက QDL Toolကိုဖွင့်ပါ
ရောက်ပြီးဆိုပါက ပုံပါအတိုင်း file pathဆိုတဲ့ စာသားကိုနှိပ်ပါ
မိမိတို့7060 firmwareကိုdowပြီးရယူထားတဲ့ ဖိုင်းကိုထည့်ပေးပါ
အသံအတိုခလုတ်-ပါဝါခလုတ်ကိုဖိနှိပ်ပါ (10 sec)
QDL Toolက သိလာပါလိမ့်မယ် ဒီတော့အဆင်သင့်ပဲ
QDL ToolထဲကARM 11DLကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ
မိမိတို့ ဖုန်းအစုတ်အပြတ်လေးဟာ အဲ့ မှားလို
ဒါလေးက Driver မသိရင်သွင်းဖို့..
SPD driverကိုdownပါအရေးကြီးတယ်နော်တကယ်လို့ SPD driver မrumရင်firmwareတင်ရမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်ADB DriverကိုInstallလိုက်ပါ
driver cp7060_usb drive .rar
အဲမှာ Extract လုပ်ပြီး Run လိုက်ပေါ့နော်.. ဒါဆိုရင်သိပါပြီ.. ဟဲဟဲ ဒါလို့ဝှ့်ချက်ပေါ့
(ပြောပါမယ် ကျွန်တော့်အတွေးပေါ့နော် window ရွေးတာမဟုတ်ပါဘူး main က driver ပေါ့နော် ဟဲဟဲ)
အဲဒါနဲ့ လက်တို့ပြီးးတော့ပြောရအုံးမယ် ကျွန်တော်အဆင်ပြေတာ က အဲ့ driver သွင်းပြီး Researchdownloader နဲ့အဆင်ပြေတာနော် ၃ မိနစ်နဲကြာတယ်းးးးးးးးးးးးးး
Cherry Mobile Firmware Earror နဲ့ ကျန်တဲ့ Earror အပေါင်းတို့ နောက်နေ့မှတင်ပေးပါ့မယ်နော် အခုကမအားတော့လို့ပါ
ဟဲဟဲဒါလေးက လောင်ဆတ်လက်တောင် တိန်ငိငိ
ခုပေးထားတဲ့ပုံလေးက android device အားလုံးကို driver သွင်းနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနဲ့အတူတွဲကြည်တော့ပို မှတ်မိတာပေါ့..။ရေးမပြတော့ဘူး ပုံထဲက အတိုင်းလေးပဲ လွယ်ပါတယ်။SPD သုံး ဖုန်းတွေသာ driver သွင်းရင် တိုင်ပတ်တာပါ။့